Chii chinonzi humidity uye kukosha kwayo mune meteorology | Network Meteorology
Kukosha kwe humidity mune meteorology
Humidity yakakosha meteorological kusiyanisa nekuti mhute yemvura inogara iripo mumhepo yedu. Zvisinei nekupisa kwetembiricha yemweya watinofema, inogara iine mweya wemvura. Isu tajaira kuona hunyoro kunyanya pamazuva anotonhora echando.
Mvura ndechimwe chezvinhu zvikuru zvemuchadenga uye zvinogona kuwanikwa mumatatu ese (gasi, mvura uye yakasimba). Muchikamu chino ini ndiri kuzotsanangura zvese zvaunoda kuti uzive nezve humidity semamiriro ekunze uye izvo zvazviri. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezvazvo?
1 Chii chinonzi humidity? Mhando dzekunyorova
2 Mhepo yemhepo inogutswa rini?
3 Tingaite sei kuti mhepo izadze?
4 Nei mota windows windows uye isu tinoibvisa sei?
5 Unoyera sei humidity uye kubuda kwemvura?
Chii chinonzi humidity? Mhando dzekunyorova
Humidity ihwo huwandu hwehutsi hwemvura mumhepo. Huwandu uhwu haugare huripo, asi hunoenderana nezvinhu zvakasiyana, sekunge kwanaya nguva pfupi yadarika, kana tiri pedyo negungwa, kana paine zvirimwa, nezvimwe Izvo zvakare zvinoenderana nekupisa kwemhepo. Ndokunge, mhepo painodzikisa tembiricha yayo inokwanisa kubata mhute yemvura shoma ndosaka mhute ichioneka kana tichifema, kana dova usiku. Mhepo inozadzwa nemhute yemvura uye haikwanise kubata yakawanda, saka mvura inova yanyorova zvakare.
Zvinoda kuziva kuziva kuti mweya yemurenje inokwanisa sei kuchengetedza humidity yakawanda kupfuura mweya wepolar, nekuti mweya unopisa haukurumidze kuzara nemhute yemvura uye unokwanisa kuve uine huwandu hwakawanda, usingaite mvura yemvura.
Pane nzira dzinoverengeka dzekureva hunyoro mumhepo.
Mhedziso humidity: hunyoro hwemhute yemvura, mumagiramu, mune 1m3 yemhepo yakaoma.
Chaicho mwando: hunyoro hwemhute yemvura, mumagiramu, mune 1 kg yemweya.
Rkusanganisa nzvimbo: hunyoro hwemhute yemvura, mumagiramu, mu1 kg yemhepo yakaoma.
Nekudaro, chiyero chinonyanya kushandiswa chinyoro chinonzi RH, iyo inoratidzwa sepesenti (%). Inowanikwa nekuda kwekukamura pakati pemhepo ine huremu hwemhepo uye huwandu hwayo hwekuchengetedza uye ichiupamhidzira ne100. Ndozvandakambotaura kare, kuwanda kwetembiricha ine huwandu hwemhepo, iyo tembiricha yakanyanya hwakawanda hwemvura, saka hunyoro hwayo hungave hwakareba.
Mhepo yemhepo inogutswa rini?
Iyo yakanyanya inokwana kubatisa huni hwemvura inonzi inogutsa mweya wemhepo. Ukoshi uhwu hunoratidza huwandu hwakawanda hwemhute yemvura iyo inogona kuve nemhepo mhepo isati yashanduka kuita mvura yemvura.
Kutenda kune hunyoro hune hukama, tinogona kuva neruzivo rwekuti padyo nemweya wekusvika kusvika pakuzara kwayo, saka, mazuva atinonzwa kuti hunyoro hune hukama i100% vari kutitaurira kuti mhepo yemhepo haisisipo inogona kuchengeta yakawanda mvura mhute uye kubva ipapo, chero mamwe emvura anowedzera kuwanda kwemhepo achaumba madonhwe emvura (anozivikanwa sedova) kana makristasi echando, zvinoenderana nemamiriro ekunze. Kazhinji izvi zvinoitika kana tembiricha yemhepo yakadzikira uye ndosaka isingakwanise kubata mamwe mweya wemvura. Sezvo tembiricha yemhepo inowedzera, inokwanisa kubata mhute yakawanda yemvura isina kuzara uye ndosaka isingagadzire madonhwe emvura.
Semuenzaniso, munzvimbo dzemahombekombe egungwa, muzhizha kune hunyoro hwakanyanya uye "unonamira" kupisa nekuti madonhwe emafungu pamazuva emhepo anogara mumhepo. Zvisinei, nekuda kwekushisa kwayo kwakanyanya, haigone kuumba madonhwe emvura kana kuzara, sezvo mhepo inogona kuchengeta mhepo yakawanda yemvura. Ndicho chikonzero nei dova risingaumbike muzhizha.
Tingaite sei kuti mhepo izadze?
Kuti tinzwisise izvi nenzira chaiyo, tinofanirwa kufunga patinofema mweya wemvura kubva mumuromo medu munguva dzehusiku hwechando. Mhepo iyoyo yatinoburitsa mweya patinofema ine imwe tembiricha uye zvemukati zvemvura. Nekudaro, painobuda mumuromo medu uye ikasangana nemhepo inotonhora iri kunze, tembiricha yayo inodonha zvakanyanya. Nekuda kwekutonhorera kwayo, iyo mhepo yemhepo inorasikirwa nekwanisi yekuve nemhepo, nyore kusvika kuzadza. Zvino mvura iya inoyerera yoita mhute.
Zvekare, ini ndinoonesa kuti iyi ndiyo imwecheteyo mashandiro anoita dova rinonyorovesa mota dzedu husiku hunotonhora hwechando. Naizvozvo, iyo tembiricha kune iyo mweya wemhepo inofanira kutonhodzwa kuti ibudise mhepo, pasina kusiyanisa hutsi hwayo, inonzi tembiricha yedova kana nzvimbo yedova.
Nei mota windows windows uye isu tinoibvisa sei?
Kugadzirisa dambudziko iri rinogona kuitika kwatiri munguva yechando, kunyanya husiku uye pamazuva ekunaya, isu tinofanirwa kufunga nezve kuzadza kwemhepo. Patinopinda mumota uye tichiuya kubva mumugwagwa, hwemhute yemota yemota inotanga kukura patinofema uye, nekuda kwetembiricha yayo yakadzika, inoguta nekukasira (humidity yayo inosvika 100%). Kana mweya uri mukati memotokari ukazara, zvinoita kuti mahwindo aite mhute Nekuti mweya hauchakwanise kuramba uchingobata mweya wemvura, asi isu tinoramba tichifema uye nekuburitsa mweya wakawanda wemvura. Ndokusaka mweya uchiguta uye zvese zvakasara zvinoshandurwa kuita mvura yemvura.
Izvi zvinoitika nekuti isu takachengeta tembiricha yemhepo nguva dzose, asi isu takawedzera yakawanda mvura mhute. Tingagadzirise sei izvi uye tisingakonzere tsaona nekuda kwekuonekwa kwakaderera kwegirazi rine fog? Tinofanira kushandisa kupisa. Uchishandisa kupisa uye kuendesa kune iwo makristasi, Tichawedzera tembiricha yemhepo ichiita kuti igone kuchengetedza mamwe mweya wemvura isina kuzara. Nenzira iyi, iwo mhute windows anonyangarika uye isu tinokwanisa kutyaira mushe, pasina imwe njodzi yakawedzerwa.
Unoyera sei humidity uye kubuda kwemvura?
Humidity inowanzo kuyerwa nechiridzwa chinonzi psychrometer. Izvi zvine maviri akafanana thermometer, imwe yacho, inonzi "yakaoma thermometer", inongoshandiswa chete kuwana iwo mweya wekupisa. Imwe yacho inonzi "wethemmeter yakanyorova", ine dhamu rakafukidzwa newebhu rakanyoroveswa pachishandiswa tambo inoiisa mukubata nedura remvura. Iko mashandiro ari nyore kwazvo: iyo mvura inonyudza iyo webhu inoputika uye kune izvi zvinotora kupisa kubva kumhepo inoikomberedza, iyo tembiricha inotanga kudonha. Zvichienderana netembiricha uye yekutanga mhute yemweya mweya, huwandu hwemvura inopwa huchave hukuru kana hushoma uye pamwero wakafanana pachave nekudonha kukuru kana kushoma mukutonhora kwetemomometer yakanyorova. Zvichienderana nehunhu huviri uhwu, hunyoro hunowanikwa huchiverengerwa uchishandisa musvomhu inoenderana nazvo Kuti ive nyore, iyo thermometer inopihwa nematafura maviri ekupinda ayo anopa zvakananga hunyoro ukoshi kubva kumatembiricha ema thermometer maviri, pasina kuita chero kuverenga.
Kune chimwe chiridzwa, chakanyatso nyatso kupfuura icho chemberi, chinonzi aspyropsychrometer, umo mota diki inova nechokwadi chekuti mahemmeter anoramba aine mweya.
Sezvauri kuona, kana zvasvika kune meteorology uye sainzi yemamiriro ekunze, hunyoro hwakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Kukosha kwe humidity mune meteorology
Jose Alberto akadaro
Yakanaka kwazvo inotsanangudza chinyorwa, ndinokukorokotedza nebasa raunoita, kwaziso ..
Pindura José Alberto
Raul Santillan akadaro
Yakanaka chinyorwa Chinyorwa cheGerman Portillo, unoziva here kuti hunyoro huri mune chigadzirwa chakagadzirwa kubva pamakadhibhodi kana pepa chinogona kupinzwa?
Kana kana isingakwanise kubviswa, dzikisa% mwando!
Pindura Raul Santillan
Humbowo hwekuvapo kweshanduko yemamiriro ekunze
Gungwa Rakafa rinogona kunyangarika here?